Inkonzo yeArhente ebhalisiweyo kuwo onke amazwe e-50
Ummeli obhalisiweyo ngokusemthethweni ufuneka ngokusemthethweni ngumbutho okanye yinkampani encinci yeemfanelo phantse kuwo onke amagunya. Ummeli obhalisiweyo wamkela amaxwebhu asemthethweni kwaye anokunceda ekuqinisekiseni ukuba amaxwebhu athile afayilishwa ukugcina inkampaniimi kakuhle. Ngenxa yoko, iarhente ebhalisiweyo kufuneka ifumaneke kwidilesi yendawo edweliswe kwiirekhodi zikawonke-wonke ukusuka kwi-9 kusasa ukuya kwi-5 pm ngeempelaveki. Iinkampani ezihlanganisiweyo zibonelela ngeenkonzo zearhente ezibhalisiweyo kuwo onke amashumi amahlanu kunye neendawo zaphesheya kwezilwandle. Nceda unxibelelane nomhlobo wakho ukuze ufumane okungakumbi malunga nale nkonzo. Iiarhente ezibhalisiweyo zifunwa ngokusemthethweni yimimandla emininzi.
Iinkampani ezihlanganisiweyo zibonelela ngenkonzo ye-Arhente ebhalisiweyo ESIMAHLA nayo yonke imibekelelo yokufakwa kunyaka wokuqala.